लामो समयसम्म चोटपटक निको नभए मधुमेह भएको हुन सक्छ | गृहपृष्ठ
Home लामो समयसम्म चोटपटक निको नभए मधुमेह भएको हुन सक्छ
लामो समयसम्म चोटपटक निको नभए मधुमेह भएको हुन सक्छ
डा. विमल कुँवर को–अर्डिनेटर तथा फार्मेसी लेक्चर नोबेल कलेज अफ हेल्थ साइन्स, सिनामङ्गल
पछिल्लो समय नेपालमा नसर्ने रोग बढ्न थालेको छ । खानपान र रहनसहनमा आएको परिवर्तन र शारीरिक व्यायामको कमीका कारण शहरी भेगमा यो रोगले भयावह रूप लिएको छ । नसर्ने मुख्य रोगहरू क्यान्सर, मधुमेह र मुटुरोगमध्ये मधुमेहले ग्रसितको सङ्ख्या धेरै छ । सामान्य बोलीचालीमा ‘डायबिटिज’ भनेर चिनिने मधुमेह रोग लागेपछि निको पार्न सकिँदैन । शरीरमा यसलाई नियन्त्रण गरेर मात्र राख्न सकिन्छ । नोबेल मेडिकल कलेज, सिनामङ्गल काठमाडौंका विभाग संयोजक तथा फार्मेसी लेक्चर डा. विमल कुँवर चिकित्सा क्षेत्रमा भएका अध्ययनले मधुमेह रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने बताउ“छन् । पाकिस्तानको पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट डाक्टर अफ फार्मेसी गरेका डा. कुँवरसँग मधुमेह रोग, यसका लक्षण, उपचारलगायत विषयमा आर्थिक अभियानले कुराकानी गरेको छ :
नेपालमा मधुमेहको अवस्था कस्तो छ ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल जनसङ्ख्याको ९ दशमलव १ प्रतिशत (अनुमानित) मधुमेहबाट ग्रसित छन् । अहिले नेपालको जनसङ्ख्याको यति नै प्रतिशतलाई यो रोग छ भनेर यकिन गर्न त सकिँदैन । यद्यपि, शहरी क्षेत्रका अधिकांशलाई मधुमेह भएको नेपाल मधुमेह सङ्घको तथ्याङ्क छ । त्यसैले, शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेलाई मधुमेहको जोखीम कम देखिएको छ । समग्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल मधुमेहको उच्च जोखीमयुक्त देश हो भन्न सकिन्छ ।
मधुमेह रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी भएपछि हुने एक प्रकारको रोग हो । मधुमेह भएमा शरीरले खानाबाट प्राप्त हुने ग्लुकोजलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्दैन, जसले गर्दा विस्तारै मुटु, मिर्गौला, आँखा र स्नायु प्रणालीमा असर पर्न थाल्छ । अझ भन्नुपर्दा प्याङ्क्रियाज ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने इन्सुलिनले चिनी अर्थात् कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने काम गर्छ । अनि रगतमा यसको मात्रा सन्तुलित र नियमित गर्छ । तर, जब इन्सुलिनको उत्पादन कम हुन्छ, त्यसपछि रगतमा चिनीको मात्रा बढ्न थाल्छ । प्याङ्क्रियाजले पर्याप्त इन्सुलिन उत्पादन नगर्दा वा शरीरले इन्सुलिनको उपयोग गर्न सक्दैन । यसबाट मधुमेह हुन्छ ।
चिनीको उपयोग स्वास्थ्यका लागि साँच्चिकै हानिकारक हो त ?
गुलियो स्वाद नरुचाउने हामी शायदै छौं होला । तर, अहिले मानिसहरू अति सजग भएर न्यूनतम चिनी प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । प्रायः मानिसमा के भ्रम छ भने चिनीमा शरीरलाई चाहिने शक्ति पाइन्छ । तर, मानिसले खाने गरेको दूध, फलफूल, अन्न र अन्य दैनिक खाद्यपदार्थबाट शरीरलाई आवश्यक गुलियो तत्त्व प्राप्त हुन्छ । यसकारण चिनीको उपयोगमा विशेष विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यसो गर्दा मधुमेह, उच्च कोलेष्टेरोल र मुटुसम्बन्धी जटिल समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
मधुमेह कति प्रकारका छन् ?
सामान्यतया मधुमेह दुई प्रकारको हुन्छ । पहिलो, मधुमेह इन्सुलिनमा निर्भर रहेको मधुमेह हो, जहाँ इन्सुलिनको उत्पादन शून्य अथवा अत्यन्त न्यून हुन्छ । यो प्रायःगरी कम उमेरमा लाग्ने मधुमेह हो । यो रोगीलाई बचाउन कृत्रिम रूपमा इन्सुलिन अत्यन्त आवश्यक पर्दछ ।
दोस्रो, मधुमेह इन्सुलिनमा मात्र निर्भर हुँदैन । यसमा प्याङ्क्रियाजले कम इन्सुलिन उत्पादन गर्ने अथवा शरीरले इन्सुलिन ग्रहण गर्न नसक्ने हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा लाग्ने मधुमेह यही हो । विश्वमा यही प्रकारको मधुमेह रोगका बिरामी धेरै छन् ।
गर्भवती अवस्थामा पनि मधुमेह लाग्न सक्छ ?
गर्भवती हुँदा पनि मधुमेह लाग्न सक्छ । पौष्टिक आहारको कमीले पनि मधुमेह लाग्न सक्छ । यसबाहेक अन्य कारण, जस्तै– इन्सुलिन र ग्लुकोजको सन्तुलन बिग्रेर पनि मधुमेह लाग्न सक्छ । गर्भवती हुँदा लाग्ने मधुमेहलाई जेष्टेशनल मधुमेह भनिन्छ । गर्भवती महिलामा जुनसुकै बेला रगतमा चिनीको मात्रा उच्च हुन गई मधुमेह लाग्न सक्छ । गर्भवती बेला खतरा बढाउने पक्ष भनेको मोटोपना हो । परिवारमा विगतमा कसैलाई मधुमेह लागेको भए वंशाणुगत कारण पनि मधुमेह देखिन सक्छ । यसैगरी गर्भमा रहेको बच्चाको तौल बढी भएमा पनि मधुमेह लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
मधुमेह लाग्नुको मुख्य कारणचाहिँ के हो ?
बाबुआमामा मधुमेह छ भने वंशाणुगत कारण छोराछोरीमा पनि सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले, यस्तो सम्भावना भएकाहरूले समयसमयमा स्वास्थ्य जाँच गराइराख्नुपर्दछ । यसैगरी आवश्यकताभन्दा बढी तौल हुँदा अथवा बढी मोटोपनाले पनि मधुमेह लाग्ने सम्भावना हुन्छ । व्यायामको कमी, अस्वस्थ आहार–विहार, उच्च रक्तचाप हुनु पनि मधुमेहको कारणहरूमै पर्छन् । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा इन्सुलिन उत्पादन गर्ने प्याङ्क्रियाजको बिटाकोसमा सङ्क्रमण हुँदा वा यावत् कारणबाट न्यून दरमा इन्सुलिन उत्पादन हुनु मधुमेहको अर्को कारण हो ।
मधुमेहका लक्षण के कस्ता हुन्छन् ?
बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा मधुमेहका मुख्य लक्षणहरू यस्ता छन् :
मुख सुक्खा हुनु, अस्वाभाविक रूपमा तिर्खा लाग्नु, छिटोछिटो पिसाब लागिरहनु, बढी भोक लाग्नु, कमजोरी र थकान महसूस हुनु । यसैगरी यो रोग लाग्दा दृष्टि धमिलो हुन्छ । लामो समयसम्म चोटपटक निको नहुनु, हातखुट्टा झमझमाउनु, रिङ्गटा लाग्नु पनि मधुमेहका लक्षण हुन् । यी लक्षणहरू देखिएमा बिरामी आफै सजग हुनुपर्दछ र सम्बन्धित डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ । यसरी मधुमेहबाट हुने थप जटिलता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
मधुमेहको उपचार के हो र कसरी गरिन्छ ?
मधुमेह लागिसकेपछि रोगीको आयु बढाउने र रोगको व्यवस्थापन गराउने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ । मधुमेहको व्यवस्थापन भनेको रगतमा भएको चिनीको मात्रा घटाउनु हो र त्यसको प्रतिकुल असरहरू कम गराउनु हो । मधुमेहको प्रकार र अवस्था हेरेर चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम इन्सुलिनको मात्रा यथावत् राखी रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रणमा ल्याउन औषधि सेवन गर्न सकिन्छ । अवस्था हेरेर कृत्रिम इन्सुलिन दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । योसँगै रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नु पनि अति आवश्यक छ ।
यसैगरी खानामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बढी कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराको सेवन गर्नु हुँदैन । समयसमयमा उपयुक्त सूची बनाएर खानपान अघि बढाउनु पर्दछ । बढी चिल्लोयुक्त पदार्थको सेवनमा पनि विशेष विचार पुर्‍याउनुपर्छ । सन्तुलित र नियमित व्यायाम गर्नाले मधुमेहलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
मधुमेहको उच्च जोखीम भएकालाई सुझाव के दिनुहुन्छ ?
मधुमेहको उच्च जोखीम भएका व्यक्ति अथवा कसैलाई पनि मधुमेह नहोस् भन्न उचित खानपान र दैनिक व्यायाम अति आवश्यक छ । यसबाहेक ग्लुकोमिटर, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नाप गर्ने यन्त्रको प्रयोग गरी शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा परीक्षण गरिराख्नुपर्छ । यस्ता यन्त्र सर्वसुलभ रूपमा फार्मेसीहरूमा उपलब्ध हुन्छन् । त्यसको प्रयोगविधि पनि निकै सरल छ । यसको मद्दतले हामी घरैमा सहजै ग्लुकोजको मात्रा जाँच्न सक्छौं । मधुमेहको उच्च जोखीम भएका व्यक्ति र यसका रोगको औषधि सेवन गर्नेहरूलाई यो मेशिन निकै उपयोगी छ । यसमा ग्लुकोजको मात्रा बढेको देखिएमा तुरुन्त नजीकको अस्पतालमा सम्पर्क राखेर अन्य सेवा लिन सकिन्छ ।
Madhumeh ko birami lai glucose chadawna hunxa ki hudaina?
LeaveaReply to Chandan khanal Cancel Reply